Magandanga eKisimusi anobaya mhirizhonga akamiswa nemapurisa ekuFrance
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » France Kuputsa Nhau » Magandanga eKisimusi anobaya mhirizhonga akamiswa nemapurisa ekuFrance
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • France Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Gurukota rezvemukati menyika yeFrance, Gérald Darmanin, vatsinhira kusungwa kwevanhu vaviri, avo vanga vachironga kurwisa nemapanga munzvimbo dzeveruzhinji panguva yeKisimusi.
French General Directorate yeInternal Security (DGSI) mapurisa akasunga vaviri Islamic State vainzwira tsitsi, vakanga vachironga kuurayana kweKrisimasi, vachitarisira kutema nemapanga vakawanda vaitenga pazororo racho uye 'kufa sevafiri kutendeka.'
"Kutyisidzirwa kwemagandanga kuchiri kwakakwirira muFrance, hatisi kuderera," akadaro Darmanin.
Sekureva kwenhau dzeFrench media dzinotaura zvinyorwa mukati meFrance judiciary, iyo DGSI akasunga varume vaviri, vese 23, munaNovember 29 mudhipatimendi reÎle-de-France. Mumwe akavharirwa muMeaux, uye wechipiri muPecq, kune rimwe divi reParis. Vakapomerwa uye vakaiswa mujeri musi wa3 Zvita, sechikamu chekuferefeta kwakavhurwa nevachuchisi vekurwisa hugandanga. Hapanawo azivikanwa nezita.
Mumwe wevasungwa ava anonzi akadura kumapurisa kuti vaironga kurwisa nemapanga munzvimbo dzinogara veruzhinji panosvika Kisimusi vofa semafirakutenda. Zvinangwa zvavo zvaisanganisira nzvimbo dzekutengesera, mayunivhesiti nemigwagwa ine vanhu vakawanda. Mabhuku eJihadist uye Islamic State (IS, yaimbova ISIS) mabhuku akawanikwa panguva yekutsvaga dzimba dzavo, BFMTV yakashuma.
Mumwe wacho akabvuma kuti 'aifarira' Islamic State asi akaramba kuronga kurwiswa, maererano neAFP. Akambopihwa mutongo nedare revana reParis muna Kubvumbi 2019 makore mana ari mutirongo, iyo mwedzi makumi matatu yakamiswa nekuongororwa, sekureva kwemapurisa.
Varume vaviri ava vakatanga kuonana pasocial media, uye vakazosangana pachavo, mapurisa eFrance akadaro.